Incwadi yomsebenzisi ye-Sharper ye-Wireless Earbuds [XO-9656-2] -Iincwadana +
Iincwadana zomsebenzisi zenziwe lula.
Incwadi yeSharper ye-Wireless Earbuds yoMsebenzisi [XO-9656-2]
Oktobha 18, 2020 Oktobha 18, 2020
13 Comments Kwincwadi yomsebenzisi ye-Sharper Image ye-Earbuds yomsebenzisi [XO-9656-2]
Ikhaya » Umfanekiso obukhali » Incwadi yeSharper ye-Wireless Earbuds yoMsebenzisi [XO-9656-2]
I-Sharper Image yinyani yeendlebe ezingenazingcingo
Phambi kokuba Uqale…
Ukuqinisekisa ukusetyenziswa okukhuselekileyo nokufanelekileyo, funda lonke ulwazi ngokhuseleko ngaphambi kokusebenzisa isixhobo. Sebenzisa kuphela iibhetri ezivunyiweyo zomenzi, iitshaja, izixhobo kunye nezinto ezikhoyo.
ESI SIXHOBO ASISOSITO, SUKUVUMELA abantwana okanye izilwanyana ukuba zisebenzise okanye zidlale ngesi sixhobo.
Musa ukudibanisa, ukuguqula okanye ukulungisa isixhobo.
Musa ukuntywila emanzini.
Ibhetri esezantsi inokubangela uqhagamshelo olubi lweBluetooth okanye ukugqwetha kwesandi
Musa ukutshaja kakhulu ibhetri.
Musa ukuyivelisa iyunithi kubushushu obugqithisileyo (ubushushu okanye ukubanda), amadangatye avulekileyo, ukufuma, okanye iimeko ezimanzi.
Sukuvumela amazibuko e-USB, i-jack yombane okanye ezinye izinto ezifakwe kweso sixhobo ukuba zibhenceke eluthulini okanye emanzini, okanye zidibane nazo naziphi na izinto ezihamba nazo ezinjengamanzi, umgubo wentsimbi, njl.
Ulwazi ngobomi bebhetri
Uvavanyo oluqhutywa yi-Southern Telecom ngo-Feb 2019 lufumanise ukuba ezi earbuds, zidityaniswe ngeefowuni ezininzi, kunye nomthamo obekwe kwi-50%, zahlala malunga neeyure ezi-3 zomculo kunye neeyure ezi-2 zexesha lokuthetha. , isetyenziselwa ukungabinanto ibhetri. Ubomi bebhetri buya kwahluka kuseto lwesixhobo, okusingqongileyo kunye nezinye izinto.
Imibuzo kunye neNkxaso yabaThengi
Kwimibuzo, ukusombulula ingxaki okanye naluphi na olunye uncedo, nceda undwendwele iwebhusayithi yethu eSouthernTelecom.com kwaye ucofe kwiNkxaso yeMveliso.
I-STBT303 -Iinyani ezingenazingcingo ze-Earbuds Plus (xl)
Ityala lokutshaja (x1)
Intambo yokutshaja ye-USB (xl)
Incwadana yomsebenzisi (x1)
Ukutshaja i-Case plug isinxibelelanisi esincinci se-USB egcwalisiweyo yokutshaja kwizibuko lokufaka i-USB emazantsi etyala. Xhuma isinxibelelanisi esikhulu kwizibuko le-USB kwikhompyuter, isixhobo sokutshaja i-USB, okanye iadaptha ye-5V ye-USB (ayifakwanga) kwaye ufake isokethi eludongeni.
Isalathiso se-LED emazantsi etyala siza kutshintsha iRED ngelixa ityala lihlawuliswa, kwaye lijike liBOMVU xa ityala ligcwele.
Vula isiciko secala lokutshaja kunye nesilayidi seendlebe kwii-earbud zokutshaja kweendlebe. Iindlebe zeendlebe ziya kuqala ukutshaja. Izalathi ze-earbuds 'ze-LED ziya kujika ziBOMVU xa zihlawulisa kwaye zicime xa zihlawuliswe ngokupheleleyo.
PHAWULA: Xa ii-earbuds ziphantsi kwamandla, ilizwi liya kuvakala libonisa ukuba kufuneka ihlawuliswe.
Ukulayita ON / OFF
Susa ii-earbuds kwityala lokutshaja ukuze usebenze ii-earbuds ON.
Cinezela kwaye ubambe zombini ii-earbuds1Multh amaqhosha kwimizuzwana engama-34 ukunika amandla i-earbuds ON.
Faka ii-earbuds kwityala lokutshaja ukuze uzicime ngokuzenzekelayo kwaye uqalise ukutshaja.
Nika amandla ii-earbuds ON ngokuzisusa kwityala lokutshaja okanye ngokucinezela ubambe iqhosha le [Multi].
Emva komzuzwana, kuya kuvakala ilizwi, elibonisa ukuba ii-earbuds ezi-2 zixhunyiwe. Enye yeendlebe iya kukhanyisa i-RED kunye ne-BLUE, enye iya kuthi gqolo ukukhanya i-BLUE.
Yenza iBluetooth kwisixhobo sakho kwaye uye kwimenyu yefowuni yeBluetooth, Khetha i-STBT303 xa ivela.
Nje ukuba ubhangqwe ngempumelelo kwisixhobo sakho, ilizwi liya kuvakala kwaye zombini i-earbuds ziya kuthi ngokukhawuleza ziqaqambe ZIBUHLE.
Ukulungelelanisa ukudlala kwakhona
Nje ukuba ubhanqe i-earbuds, unokuhlengahlengisa ukudlala kunye nevolumu ngolawulo kwisixhobo sakho esidityanisiweyo, okanye ngolawulo lweendlebe ezingezantsi.
Cinezela nokuba iqhosha le- [Multi] ukumisa. Cinezela kwakhona ukuqala kwakhona.
Cinezela kabini iqhosha le [Multi] kwi-earbud yasekunene ukutsiba uye kwingoma elandelayo.
Cofa kabini iqhosha le [Multi] kwi-earbud yasekhohlo ukutsiba uye kwingoma edlulileyo.
Ukwenza kusebenze uMncedisi welizwi
Ukuvula umncedisi welizwi, i-TW5 earbuds kufuneka ibhangqiwe M isixhobo esinomncedisi welizwi, njenge-SW okanye uMncedisi kaGoogle. Kuma mama ekusebenziseni ilizwi lomntu oncedisayo nceda unxibelelane nezinto zokubafundisa kwi-Intanethi. Cinezela ubambe iqhosha le [Multi] ngomzuzwana om-3 wokwenza umsebenzi wesincedisi selizwi kwisixhobo sakho.
Cofa nokuba li- [Multi] iqhosha ukuphendula ifowuni engenayo
Cofa nokuba kukwi [Multi] iqhosha kwakhona ukuphelisa umnxeba.
Cinezela nokuba kukwi [Multi] iqhosha ukwala umnxeba ongenayo.
Naluphi na utshintsho okanye uhlengahlengiso olungavunywanga ngokucacileyo liqela elinoxanduva
ukuthotyelwa kwalo kungalonakalisa igunya lomsebenzisi lokusebenzisa izixhobo. Esi sixhobo siyahambelana nenxalenye ye-15 yemithetho yeCCC. Umsebenzi uxhomekeke kule miqathango mibini ilandelayo:
(1) Esi sixhobo asinakubangela uphazamiseko oluyingozi, kwaye
(2) esi sixhobo kufuneka samkele naluphi na uphazamiseko olufunyenweyo, kubandakanywa uphazamiseko olunokubangela ukusebenza okungafunekiyo.
Iimpawu zorhwebo ezingumnini weSharper Image
Imibuzo malunga neNcwadana yakho? Thumela kwizimvo!
Iincwadana ezinxulumene noko
I-Sharper Image yeyona Ncwadi yoMsebenzisi yeNdlebe engenazingcingo NGAPHAMBILI SIYABULEKELA NGOKUTHENGELA KWAKHO IIMBELEKO ZENYANISO ezingenasici ....
I-Sharper Image eyiyo i-Earbuds engenazingcingo enecala lokutshaja i-STBT101 Incwadi yomsebenzisi I-SHARPER IMAGE Yenyani yee-Earbuds ezingenazingcingo ngeNtsingiselo yeMeko yoMsebenzisi ...
I-Sharper Image engenazingcingo yesiselo sokufudumeza / Incwadi yokuPholisa yoMsebenzisi Into engu-207196 Enkosi ngokuthenga iSharper Image ...
I-Sharper Image yokuZenzekelayo ukuCoca imoto engenantambo kwitshaja ye-207670 yoMsebenzisi Into engu-207670 Enkosi ngokuthenga iSharper Image ...
I-Essos yeNyaniso yokuZenzekelayo ye-Pair ye-Earbuds yomsebenzisi yomsebenzisi [XO-9568-3] INCWADANA YOMSEBENZI WABASEBENZI I-TWS Auto Pair Earbuds Model: XO-9568-3 Essos ...
Isithethi seTV esingenantambo seTV Somlomo 207072 Incwadana yomsebenzisi engenazingcingo yeSithethi seSharper Image, 207072 Enkosi ...
Oktobha 18, 2020 Oktobha 18, 2020 exhonyiweyoUmfanekiso obukhalitags: umfanekiso obukhali, I-TWS, XO-9656-2
Post edlulileyo ngeposi Previous:
I-Sharper Image DX-3 yeVidiyo yeDrone yoMsebenzisi
Post Next elilandelayo:
I-Sharper Image yeSithethi esiBini esijikeleze iShedyuli yokuSebenzisa iManyuwali yoSetyenziso 206890
UKaren H uthi:
Disemba 27, 2020 kwi-12: 08 am
Andikwazi ukudibanisa ne-iPhone 7 yam
Iindlebe zeendlebe azibonisi kuluhlu lwam lwezixhobo zeBluetooth
Disemba 28, 2020 kwi-9: 01 am
Kwizicwangciso zama ukucima iBluetooth yakho imizuzwana embalwa emva koko uphinde ubuye. Kuya kufuneka ivele ezantsi kwezixhobo zeBluetooth ezidwelisiweyo.
Disemba 28, 2020 kwi-12: 30 pm
Oko kwenzeka nakum. Ke ndibuyisele ii-earbuds kwimeko. Ndithe xa ndizikhupha kwakhona, zavela kwimenyu yam yeBluetooth. Umgangatho wesandi esihle!
January 5, 2021 apha 8: 06 pm
Amathupha adityanisiwe kwaye ndiyakwazi ukumamela umculo kunye neYouTube kwifowuni yam, kodwa andiyiva iminxeba yam kwi-Samsung Galaxy S7 yam. Ifowuni yefowuni ithi i-bluetooth iqhotyoshelwe kodwa akukho nto ihamba ngee-buds. Iingcinga zam?
January 7, 2021 apha 7: 49 pm
Andiva nantoni na kwezi zeendlebe.
January 10, 2021 apha 8: 47 pm
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ezi zinokudityaniswa nekhompyuter yeWindows?
January 13, 2021 apha 4: 52 pm
URodney B uthi:
January 14, 2021 apha 11: 25 pm
Indlebe yam indlebe iya cima kwaye iqale umculo ngaphandle kokubachukumisa. Ayizizo zombini @ 1 ixesha kodwa kunene okanye ikhohlo. Elungileyo lelona libi kakhulu. Naziphi na iingcinga zokuba kutheni?
January 23, 2021 apha 7: 07 pm
Kutheni le nto isithi iiyure ezingama-20 xa ii-earbuds zikuzo kuphela iiyure ezi-4?
U-Levi Pardon uthi:
February 22, 2021 kwi 1: 51 pm
Ndivakalelwa kukuba ii-earbuds zam bezikukuthenga okungalunganga kwaye ngekhe ndiphinde ndithenge nantoni na evela kumfanekiso obukhali kwakhona. Baye basebenza mhlawumbi kathathu.
Matshi 5, 2021 kwi-6: 04 am
Kwenzeka ntoni xa uhlawula ngaphezulu ??? Cuz ndishiye ukutshaja kwam imini yonke kwaye ngoku abazukuvula
Epreli 16, 2021 kwi-1: 05 pm
Ezi earbuds azilunganga kakhulu. Ndingabahlawulisa, ndinxibelelane nelaptop yam kwaye basebenza kakuhle imizuzu eli-10. Emva koko, ekunene kuya kucinywa. Ndicinezela / ndibambe kwi-earbud yasekunene, izakubuya ngamandla kwimizuzwana emi-3… ilungile mhlawumbi umzuzu omnye emva koko iphinde icime. Isalathiso sebhetri yam sibonisa ukuhlawulwa okungama-1%.
UCarole M. uthi:
Epreli 17, 2021 kwi-3: 37 pm
Uhla njani ivolumu? Hayi, ulawulo lwetv okanye isixhobo somlilo asisebenzi. Ndiyabulela kwangoko
XTREME B07J2QQM12 Ukujikeleza kweNcwadi yoMsebenzisi
XTREME B084RSCGPR 10000 mAh Ishaja engenamandla yeBhanki yamandla yomsebenzisi weBhanki
Isikhokelo sokufakwa ngaphandle kwamacingo i-Honeywell REM1000R1003
I-YAMAHA THR30IIA WL 30W engenacingo ye-Bluetooth Amplifier Yiva i-Acoustic Guitars Isikhokelo soMsebenzisi
I-XTREME 53363209 RETRAX iBluetooth yokuLungisa i-Earbuds Iseti yomsebenzisi Isikhokelo
admin on Incwadana yomnini wePanasonic Blu-ray Disc Player
UJimmy Enriquez on UTHANDO Lush 3 Bullet Vibrator Incwadi yomsebenzisi
UBrett M Caliman on Isifriji soMnyango weSango lesiFrentshi esiFriji soSapho kunye naManzi aNgaphandle kunye neNcwadana yokuFundisa iQhwa
UBonnie Eborn on I-TCL-4056L FLIP Isikhokelo somsebenzisi weFowuni
gianni on Imiyalelo yebhodi yezitshixo ye-OMOTON